Islamic Relief oo shaqaalaha caafimaadka gobolka Mudug u bilawday tababarro iyo aqoon-kororsi caafimaad. – Radio Daljir
Islamic Relief oo shaqaalaha caafimaadka gobolka Mudug u bilawday tababarro iyo aqoon-kororsi caafimaad.
Galkacyo, July 26 – Hay?adda Islamic Relief oo ka hawl-gasha inta badan deegaannada Puntland ayaa gobolka Mudug ka bilawday qorshe lagu kobcinayo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha caafimaadka ee gobolka, iyadoo u bilawday tababarro ku saabsan caafimaad.
Hay?adda ayaa maanta 25 shaqaale caafimaad ah tababar uga furtay xarunta Jaamacadda PSU ee magaalada Galkacyo tababarkaasi oo socon-doona muddo saddex asbuuc ah, waxaana loo qorsheeyey in ay muddadaasi uga faa?idaystaan aqoon la xiriirta fulinta adeegyada caafimaadka.
Shaqalaaha caafimaad ee maanta loo bilaabay tababar-aqooneed ayaa ka kala yimid dhammaanba xarumaha caafimaadka ee ku kala yaalla degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Mudug gaar ahaanna MCH-yada iyo Healthy-post-yada yaryar ee wasaradda caafimaadku ku leedahay tuulooyinka.
Furitaanka tababarkaan maanta waxaa ka soo qayb-galay madaxda wasaarada caafimaadka ee gobolka Mudug, mas?uuliyiinta hay?adda Islamic Relief iyo sidoo kale xubno kale duwan oo ka mid dhakhaatiirka caafimaadka ee loo qorsheeyey bixinta casharrada muddada tababarkaani uu socda.
Madaxdii lagu marti-qaaday ka qayb-galka furitaanka tababarkaasi ayaa khudbado dardaaran ah u soo jeediyey hawl-wadeennadii caafimaad ee halkaasi ku sugnaa, iyagoo u soo jeediyey in ay ka faa?idaystaan fursaddaan kaddiba uga faa?ideeyaan dadkooda iyo deegaannada ay ka kala yimaadeen.
Qorshahaan la xiriira kobcinta iyo kor-u-qaadidda aqoonta hawl-wadeennada caafimaadka ee gobolka Mudug ayaa waxaa maal-galisay hay?adda Islamic Relief, halka fulinta ay iska leedahay Jaamacadda Puntland State, waxaana kaloo iyana dawr ku leh hirgalinta tallaabadaan wasaaradda caafimaadka Puntland.